Xiddigii Ugu Fiicnaa Ee Uu Kahor Tagay, Midkii Ugu Fiicnaa Ee Uu Ka Garab Ciyaaray & Cesc Fabregas Oo Soo Xushay Kulankii Ugu Fiicnaa Ee Uu Ciyaaray - Gool24.Net
Xiddigii Ugu Fiicnaa Ee Uu Kahor Tagay, Midkii Ugu Fiicnaa Ee Uu Ka Garab Ciyaaray & Cesc Fabregas Oo Soo Xushay Kulankii Ugu Fiicnaa Ee Uu Ciyaaray
Xiddigii hore ee kooxaha Arsenal, Barcelona iyo Chelsea haatana ka tirsan kooxda AS Monaco ee Cesc Fabregas ayaa soo xushay xiddigii ugu fiicnaa ee uu ka garab ciyaaro, midkii ugu fiicnaa ee uu kahor tago iyo kulankii ugu fiicnaa ee uu ciyaaro.
Fabregas ayaa ku jira sanadihii ugu dambeeyay ee xirfadiisa ciyaareed iyadoo heshiiskii uu sanadkii 2019 kaga tagay Chelsea ee uu ugu wareegay Monaco ay ka dhigtay inuu kooxdiisii afraad waayihiisa ciyaareed ku biiray.
Fabregas oo 33 sano jir ah ayaa kusoo guuleystay laba horyaal Premier League si lamid ah La Liga, sidoo kale koobabkii Euro 2008 iyo 2012 ayuu Spain lasoo qaaday iyo waliba koobkii aduunka ee 2010.
Ugu horreynba, Cesc ayaa xiddigii ugu fiicnaa ee uu kahor tago ku sifeeyay kabtankii Liverpool ee Steven Gerrard kaas oo uu ku tilmaamay mid jidh ahaan xooganaa.
“Waa inaan mid doortaa, dhab ahaana anigu waan ku raaxaystay inaan kahor tagay, waxaan odhan lahaa Steven Gerrard, isagu jidh ahaan waxa uu ahaa xiddiga kaa hor imanaya ee ay ugu adag tahay in la qabtaa” ayuu yidhi Cesc Fabregas.
Sidoo kale Fabregas ayaa kulanka dookhiisa ah ku tilmaamay midkii 2011 dhex maray Arsenal oo uu markaas ka tirsanaa iyo Barcelona iyadoo ay Gunners ciyaartaas 2-1 ku adkaadeen walow lugtii dambe Champions League laga cidhib tiray.
“Markii aan joogay Arsenal ee aanu Barcelona 2-1 ku garaacnay Champions League ee Emirates 2011, waxaan filayaa inaanu si cajiib ah u ciyaarnay kulankaas”
Ugu dambayn, Fabregas ayaa kabtanka Barcelona ee Lionel Messi oo uu ku tilmaamay mid aan cidna lala bar-bardhigi karin ku sifeeyay xiddigii ugu fiicnaa ee uu ka garab ciyaaray.
“Sida iska cad waa Lionel Messi, waxaan isaga la ciyaaray tan iyo markii aan 13 sano jirka ahaa, sida cad hibadiisu waa mid aan lala bar-bardhigi karin waxkasta oo aan noloshayda arkay”